Milalaova amin'ny GIMP: Power Lines | Avy amin'ny Linux
Milalaova amin'ny GIMP: Power Lines
Hyuuga_Neji | | Tutorials / Manuals / Tips
Androany dia somary mankaleo aho ka nanomboka nilalao tamin'ny fitaovana famolavolana tiako indrindra: GIMP, Ary hatramin'ny fotoana lasa izay dia tsy namoaka na inona na inona aho teto, ka eto avelako zavatra iray ho anao.
Samy nahita zavatra tamin'ny saga ny olon-drehetra Adin-kintana na Star Wars ka tsy maintsy hain'izy ireo ny jiro fanaovan-jiro an'ny Jedi.
Eny, mizara zavatra amin'ny fika kasaiko halefa anio ireo mpamily jiro ireo ho an'ny mpamaky rehetra izay tia an'ity mpizara manetry tena ity dia tia mandany ampahany amin'ny fotoana malalaka ananany eo anoloan'ny GIMP:
1 Vokatry ny neon
2 Fanomanana ny tany
3 Mamorona ny andalana heriko
4 Fampiharana ny vokatry ny neon
5 Mametraka ny famaranana mikasika
Vokatry ny neon
Ny vokarin'ny neon dia nanjary nalaza be tamin'ny taona 90 tany ho any ary misy ny fanahafana ny loko mamirapiratra manodidina ny sisin'ny tarehimarika (maro ny paositry ny jiro no mampiasa neon hahatratrarana izany vokatra izany) ary tsikelikely no nentina tany amin'ny tontolon'ny manokana ny vokany sy ny endriny amin'ny ankapobeny.
Raha ny lafiny teknika, ny tsipika angovo, dia hitovy amin'ny jiro Jedai (tsipika misy vokany neon hanome azy famirapiratana) avy amin'ny Starwars, ihany fa tsy ho iharan'ny artifact voalaza izy ireo fa arakaraka ny anaran'ny anarany ... amboary angovo azo antoka amin'ny sary tianay ovaina
Ho an'ity fikafika ity dia nisafidy refy 800 × 600 pixel aho ary nametraka lafika mainty mba "hampitombo" ny vokatry ny Neon. Rehefa avy nilaza an'izany izahay dia nanohy namorona tetikasa vaovao misy refy.
Aorian'ny fananako ny tetikasako miaraka amina endrika mainty (# 000000) dia mitady rendera aho (sary efa nohetezana) izay ho sary hampiarahanay ny angovo, nisafidy samurai sola hitako teo amin'ny rindrina iray aho.
Mamorona ny andalana heriko
Amin'ny fampiasana ny fitaovan'ny Routes (B) dia manome ny endrika tadiavinay ny andalana izahay, ohatra aho nanandrana nanome fomba miolakolaka manodidina ny sary samurai iray manontolo araka ny ahitanao ny sary.
Marina ny manazava fa amin'ny fomba amam-panao miasa miaraka amin'ny fomban'ny sosona ny zotram-panamboarana dia vita amin'ny sosona vaovao, noho izany alohan'ny hampiasana ny fitaovan'ny zotra dia mamorona sosona vaovao misy mangarahara isika raha tsy tiantsika ny fomba tsy hahavery ireo tsipika. ny asa rehetra.
Raha vantany vao nahatratra an'io teboka io isika, dia mandeha hatrany amin'ny lalan-kizoranay manontolo mba hisafidianantsika ny loko fotsy (#FFFFFF) ary amin'ny safidin'ireo fitaovana dia lazainay hizaha ny habeny tokony ho 5 teboka ary tsy misy fitaovana (tsipika fanaovana sary).
Fampiharana ny vokatry ny neon
Amin'izao fotoana izao dia efa manana ny tarehimarika sy ny tsipika napetraka isika, ankehitriny dia mila manome azy ny famirapiratan'ny mazava. Sivana / Alfa mankany amin'ny Logo / Neon ary mahazo fifanakalozan-kevitra hametrahana safidy vitsivitsy izahay.
Eo izahay dia manindry ny boaty miloko ary mamela antsika hisafidy ny loko tadiavintsika ho an'ny neon, izay anoroako anao mba hitady loko iray na latsaka izay misy ifandraisany amin'ny lokon'ny sary apetratsika na amin'ny tsotra fotsiny ny iray tianao indrindra.
Rehefa mampihatra ny vokatry ny Neon dia noforonina ireo sosona 3 (ny fantsona neon, ny taratra ivelany ary ny maizina), dia esorintsika ny sosona maizina namboarina vokarin'ny vokany ary atambatra ny 2 hafa ka iray ihany (tsindrio havanana amin'ny sosona ambony / mitambatra).
Amin'izany no efa ananantsika zavatra mitovy amin'ny afisy maivana amin'ny taona 90 sy ny jiro fanaovan-jiro Starwars fa mbola tsy vita isika.
Mametraka ny famaranana mikasika
Tonga izao ny fotoana hanomezana ny farany ny asantsika, ireo zavatra izay misy blurs, manome ny eritreritra fa ny tsipika miampita ny sary, sns.
Ho an'izany dia mandeha amin'ny ampahany izahay: averina dika mitovy ny sosona tsipika ary apetaka eo amin'ny 32 teboka ny fihetsika ary manana diplaoma aotra.
Misafidy ny sary voaoty isika amin'ny alàlan'ny fanindriana tsara ny sosona sary ary kitiho ny Alpha mankany Selection.
Amin'izany fomba izany dia "manakana" izay ataontsika ho an'ny faritra ivelany isika, mametraka ny tenantsika ao anaty sosona ary, mitarika ny tenantsika amin'ny sary, hamafa ireo faritra isika mba hanomezana ny halalin'ny tsipika, aorian'ny maro na kely 2 na 3 min dia manana valiny toy izao isika:
Mety tsy io no vokany tsara indrindra saingy hey… tena mahaliana ary ny zavatra tsara indrindra dia ny fampiasantsika azy amin'ny hevitra tiantsika indrindra.
Ankehitriny dia mila manandrana ny GIMP ianao ary manome ny hevitrao momba izay hevitrao momba ity fika ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Milalaova amin'ny GIMP: Power Lines
Heveriko fa tsara ny sary an-tsary distros tsara misy vokany
CGeass dia hoy izy:
Ry tuto tsara, tsara raha toa ka navoaka tsindraindray ny iray ho antsika rehetra izay mampiasa ity programa ity.
Valiny amin'i CGeass
Eny, tokony samy hanana ny fiainany avy isika tsirairay avy, hanome ny fahalalantsika.
Misy ohatra tsara amin'ny fitaovana ao amin'ilay fanampiana, fa amin'ny fampiharana dia mianatra "fikafika" ianao mba hahamora ny zavatra.
Nanentana ahy handao ny Photoshop ianao izao.
Tutorial tsara! Ny vokany dia tsara kokoa raha milalao amin'ny hatevin'ny tsipika isika
Nandritra ny fotoana kelikely dia tena nanandrana niala ny photoshop aho ary nampiasa GIMP. Saingy tsy nahavita namboarina mihitsy aho, ary na dia manana fitaovana aza ny GIMP, dia sarotra kokoa ny mampiasa azy ireo noho ny an'ny PS, ny interface dia tsy tiako loatra.
Heveriko fa ny GIMP dia tokony hijerena farany ny fomba itondran'ny mpamorona sary amin'ny photoshop, ary hanomboka hiasa amin'ny fitaovana 'azy manokana' izay hahatonga ilay programa ho fampiasana matihanina bebe kokoa.
Tsara sy tena tsotra, zavatra hafa hianarana amin'ny GIMP 🙂
Farafaharatsiny mba nianarantsika kely ny momba ny "Alpha to Logo." Heveriko fa toy izany koa no ahafahanao manao sonia noforonina tamin'ny dian-kapoka ary avy eo mamorona borosy mitovy same
Fanamarihana iray: raha tsy diso aho dia tsy maintsy mitandrina ireo sosona hita maso rehefa atambatra, satria raha atambatra midina amin'ny sosona ambony isika dia izay rehetra eto ambany ihany no ho voakasik'izany (ireo hita maso ihany). Mitandrema amin'izany!
vaovao farany dia hoy izy:
Miandry am-paharetana ny Enlightenment 18 (na 19), ary eo am-pamakiana ny laharana faha 2 an'ny The Original Hacker
Fandikana espaniola ny Kingsoft Office 2013